Sethula kuwe entsha futhi olusha Dying Light Key Generator Tool...
Lo mdlalo video uthatha abadlali emuva yonke athandwayo lapho bangakwazi ukuthatha uhambo emthaleni omkhulu futhi sifeze inqwaba izinhlanga ezihlukahlukene alien. An ngesakhiwo okuyinkimbinkimbi, lithwele esonta enokhahlo futhi izitayela ziyakhanga, liyisici eziwumgogodla chungechunge.
Esesine video game eMiseni Effect uchungechunge akagcini ngokunikeza indaba entsha, Nokho futhi idinga babe nesu ngingcono kakhulu. Abakhi isebenzisa injini Frostbite zokuhlola ezasungulwa EA dice. Frostbite eqinisweni uye wenza abantu iye yasetshenziswa ngaphambi emidlalweni efana Battlefield 3 noma Medal of Honor.
Tags: Imidlalo ezayo